टेलिफोन फ्रड, ‘नचिनेको विदेशी नम्बरबाट फोन आए कलब्याक नगर्नुस्’ - Everest Dainik - News from Nepal
टेलिफोन फ्रड, ‘नचिनेको विदेशी नम्बरबाट फोन आए कलब्याक नगर्नुस्’
काठमाडौं, कार्तिक १६ । तपाइँलाई छिठ्ठा पर्यो, रकम पाउन यो खातामा यति रकम पठाउनुहोस् केही अघिसम्म मोबाईल वा ईमेलमा यस्ता सन्देश पाउँदा ठगिने धेरै नेपालीको उजुरी प्रहरी कार्यालयमा आउने गथ्र्यौ ।
अहिले यस्ता सन्देशका कारण ठगिने नेपाली नगण्य छन् तर, पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय ठगहरुले नयाँ उपाय अपनाउन थालेका छन् । त्यो हो फोन ठगी टेलिफोन फ्रड । यो ठगीमा पीडित बन्न कुनै खातामा रकम जम्मा गर्नु पर्दैन, टेलिफोन कल उठाए वा कलब्याक गरे मात्रै पुग्छ । जापानी भाषामा वाङगिरी भनिने यस्तो तरिकाबाट प्रयोगकर्ता सजिलै ठगिन सक्छन् ।
याे पनि पढ्नुस विदेशबाट ‘मिस्डकल’ आयो ? अब कल ब्याक नगर्नुस् !
जापानी भाषामा वाङगिरीका अर्थ हुन्छ घन्टी बनाउनु र छाड्नु । ठगहरुले विभिन्न देशका मोबाईल प्रयोगकर्तालाई यसैगरी झुक्याईरहेका हुन्छन् । प्रयोगकर्ताको मोबाईलमा एक घन्टी दिने र फोन काट्ने । प्रयोगकर्ताले उत्सुक भएर कल ब्याक गरे उनीहरुको मोबाईलबाट प्रसस्त रकम काटिन्छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
ट्याग्स: call, Miss call